दै’निक शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने म’हिलाहरु यसरी चि’निन्छन् ! – Life Nepali
दै’निक शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने म’हिलाहरु यसरी चि’निन्छन् !
दैनिक शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने महिला म’हिलाहरुको शा रीरिक बनावट केही मात्रामा परि वर्तन भए पनि एक दि नमा नै प’टक प’टक स ह’वा समा लि’प्त बन्ने म’हि’लाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फु’लेर ठू’लो हुने गरेको पाइएको छ । प्राकृतिक रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सु’न्दरताको स’दाबहार ता’रिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा म’हिलाको शा’रीरिक बि’हे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के का’रण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लि’ड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नि’यमित से८’क्स गर्ने म’हिलाको शा’रीरिक ब’ना’वट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै प’टक प’टक स’हवा’समा लि’प्त बन्ने म’हि’लाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फु’लेर ठू’लो हुने गरेको पाइएको छ ।फाइल तस्बिर
अन्त’राष्ट्रिय मि’डियाका अ’नुसार यो सर्वेका लागि म’हिलाहरुको हि’पको सबै भ’न्दा ठु’लो भा’ग र क’मरको स’बै भन्दा पा’तलो भा गको ना’ प लि’इयो । यसबाट के प’त्ता लाग्यो भने जुन के’टिहरुले एक दि’नमै प’टक प’टक यौ’८न स’म्बन्ध राखे उनीहरुको हि’पको आ’कार अरु म’हिलाको भन्दा ब’ढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन म’हिलाको क’म्मर पा’तलो हुन्छ उनिहरु ब’च्चालाई स’जिलै ज’न्म दिन सक्छन् । ज’सको हि’प ठुलो छ उनिहरुलाइ ग’र्भव’ती हुदा खा’सै स’मस्या नहुने भन्ने अ’ध्ययनले देखाएको छ ।
शा’ रिरिक स म्पर्क पछि के सो’च्छन महिला ?
शा’ रीरिक स’म्बन्ध पुरुष र म’हिलाबीचको प्राकृतिक आ कर्षणको मुख्य का’रण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पा र्ट’नरसँग मात्र शा ‘री’रिक स’म्पर्क राख्न रुचाउँछन् । शा’ रीरिक स’ म्बन्धले महिला र पु’रुषविचको स ‘म्बन्धलाई पनि म’जबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने शा’ रीरिक स ‘म्पर्क पछिको स’ म्बन्धमा वि ‘चलन भएको पनि पा’इन्छ । शा ‘रीरिक स’ म्पर्क पछि म हिलाहरूले आफ्नो पु’रुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन ? हेर्नुहोस् शा’रीरिक स’म्पर्क पछि म’हिलाहरूले सो’च्ने कुराहरू – आ’नन्द र स’न्तुष्टी’बीच फ’रक(किंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शो’धमा म’हिलाले पनि पु’रुष ज’स्तै क’ण्डम न’लगाइ शा’रीरिक स’म्पर्क गर्दा बढी स’न्तुष्टी हुने बताए ।
यद्यपी क’ण्डम ल’गाउँदा बढी सु’रक्षित म’हसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो । वि’स्तारै गरेको राम्रो-शा’रीरिक क्रि’डाका लागि ह’तारिने पु’रुष म’हिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना सं’वेदनशील को’मल अं’गमा पु’रुषले दु’ख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । सं’वेदनशी’ल अं’गसँ’ग सं’वेदनशी’ल रुपमै प्र’स्तुत भएको उनीहरुलाई म’न पर्छ । र’क्सी से’वन गर्ने चाहना– शा’रीरिक स’म्पर्क पछि केही म’हिलालाई र’क्सी से’वन गर्ने मन पनि हुन्छ । त्यो बेला उनलाई र’क्सीले आफूलाई फा’इदा गर्छ वा गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन । भो’क ला’ग्नु– शा’रीरिक स’म्पर्कका क्र’ममा श’क्ति खर्च हुन्छ । य’स का’रण तपाइको जोडीले भो’क ला’गेको म’हशु’स गरेका हुन्छ ।
तपाईप्रति स’कारात्मक– यदि शा’रीरिक स’म्पर्कका क्र’ममा तपाइले जो’डीलाई स’न्तुष्टी दिन सक्नुभयो भने उनले शा’रीरिक स’म्पर्क पछि तपाइप्रति सकारात्मक सोच्न था’ल्छिन् । चाहे उनले यसको सं’केत दिन पनि स’क्छिन्, नदिन पनि स’क्छिन् । उसले गर्ने मा’यामा फ’रक त प’र्दैन– कै’यौं प’टक म’हिलाहरुलाई शा’रीरिक स’म्पर्कपछि आफ्नो जो’डीले पहिलेको जस्तै मा’या गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा हुन्छ । यस्तो विषयले म’हिलाहरुलाई बढी सो’च्न बा’ध्य बनाउँछ । कतै मैले यो ग’लत त गरिन – यदि कुनै महिला आफ्नो श्री’मान वा ब्वा’इफ्र’ण्डलाई धो’का दिएर अन्य कसैसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध रा’ख्छिन् भने उ’नलाई आ’फूले यो के गरेको भन्ने मनमा खेल्ने गर्छ । उनलाई पछि आफूले यस्तो गर्न नसक्ने सोच्छिन् ।
शा’रीरिक स’म्पर्क एक काम– कुनै म’हिला शा’रीरिक स’म्पर्कलाई एक म’हत्व पू ‘र्णका का’र्यका रु’पमा लि’न्छिन् । जुन पुरा हुने वि’त्तिकै आफ्नो अर्को का’ममा लाग्ने ग’र्छिन् । शा’रीरिक स’म्पर्क गरेकोमा वि’श्वास न’लाग्नु– कयौं प’टक म’हिलाहरुलाई आ’फूले क’सैसँग शा’रीरिक स’म्पर्क गरेको कुरा प’त्याउन गा’ह्रो पर्न सक्छ । यस्तो दुइवटा प’रिस्थि’तीमा हुन सक्छ । पहिलो, जब शा’रीरिक स’म्पर्क गर्ने व्यक्ति पहिलो पटक शा’रीरिक सम्पर्क गरिरहेका छन् र दोस्रो, जब म’हिला जो’डीलाई आ’शा गरे विपरित स’म्पर्क भएमा । के म उनको लागि ठीक थिएँ – शा’रीरिक स’म्पर्कपछि कतिपय म’हिलाको मनमा आफू आफ्नो जो’डीको लागि ठी’क थिएँ त भन्ने कुरा पनि मनमा लाग्ने गर्छ ।
उनी आफूसँ’गको स’म्पर्कबाट आफ्नो जोडी सन्तु’ष्ट भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि जा’न्न चाहन्छिन् । दोस्रो पटक पनि गर्न सक्छौं –कुनै बेला म’हिलाहरु शा’रीरिक स’म्पर्कबाट यति धेरै स’न्तुष्ट हुन्छिन कि उनी अ’र्को प’टकका लागि पनि तु’रुन्तै त’यार हु’न्छिन् । त्यसका लागि आफ्नो जोडीको मन ता’न्न था’ल्छिन् । समय अ’भाव भ’एको म’हशुस– महिला जो’डीलाई शा’रीरिक स’म्पर्कका क्र’ममा स’मयलाई लि’एर त’पाइप्रति नि’कै अ’पेक्षा हुन्छ । उनले तपाइलाई ख’रो रु’पमा उ’त्रेको दे’ख्न चा’हन्छिन् । नभए उनी नि’राश स’मेत हु’न्छिन् ।एजेन्सीको सहयोगमा
Previous एक वा दुई छोरी मात्रै जन्माउने परिवारलाई एक लाख पुरस्कार
Next आ’मालाई क’रेन्ट लागेर ढ’लेपछि ब’चाउन ग’एका छोराको पनि नि’धन!